The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: 05/17/11
Gudiga gurmadka beesha Gurgure Back to GURGURALINK.COM
udiga gurmadka beesha Gurgure
Back to GURGURALINK.COM
Gudiga gurmaadka badbaadinta beesha Gurgure
Shir lagu qabtay magalaada Diridhabe ayaa lagu soo doortay gudiyo cusub sida ay sheegeen waxaaay matalayaan golaha Odayaasha Ugaaska. oo xagga lagu doortay shan iyo toban qof oo ku guulestay gudoomiyanimada Mr Abdiwahab,,,Gurgura ougazate council,,,Golaha odaayasha Gurguraha
Natiijada ka soo baxday ayaa u muuqata inaay dadka wax u qaaban Karan gudiga la doortay:
qorshaha ugu weyn ee shirka loo qabtay in ummada Somaliyeed ee Gurgure wax la qabto sida beeraha laga qaatay in lasoo celiyo iyo bahiida guud in la daboolo iyo isku keenista bulshada.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maanta dadka Gurgure u wada kacsanyihiin horumarka dalkooda iyo dadkooda
Dawlada Itoobiya oo laftigeeda qorshaha shirkaan kaga war haysaa talaabo deg deg ah oo horumar ah loo bahanyahay,
Tani waxay keentay inay bulshada gurgure meel walbay joogan ay kor u kacan. anigo matalaya Maamulka shabakaada gurgurelink.com waxaan idin leeyahay mudanayaal iyo marwooyin ka qeyb qaata abaabulka mustqbalka reerka walaalayaal meel walbon joogno waxaan u bahanay inaan tageero u fiidino gudiga cusub.,,,,, fadlan sidii aad warbixinta reerka lagugu soo gudbiyo soo qor emailkaaga oo saxsan mahadsanid kusoo gudbi walaal emalkaaga abdinasir_omar@hotmail.com ?, walaalayaal waxaa kalo jiirta inaan isbuuc walba ku shirno amase fikir is dhaafsano meesha loo yaqaano paltalka . magaciisu yahay Gurgure link fadlan cidii nagu iman karta kuusoodhawaada gacmo furan waad u jeedan dadka kale sida ay wax u dhistan wax walba haddii ay noqon lahaydba balse anaaga maxaa naga hor tagan taas ? ma dadka ayaan wax yar nahay ? waa suaal meesha taala
GURGURE IYO MAJEERTEEN MAXAA ISKU KEENAY ISKU DHAC
Magaalada Erer Gooto ee Gurguruhu dagaan ayaa waxaa yimid oday safara oo Majeerten ah. Sida Majeertenka cadadoodu tahay, wuxuu is yiri inta ay ku weydiin Gurguruhu waxad tahay Handad. Majeertenkii safarka ahaa biyo ayuu weydistay reer Gurgure. Markaasuu u booteeyay war Gurgure yuu galaa? Gabdhii gurgure ayaa ku tidhi arla Gurgure yuu yahay Majoognee adigu maxaad eheyd? Ninkii Majerteen baa yidhi" Majerteen baan ahay" Odeygii iyo gabartiisi qosol ilkahaa ka daadan garay madaama weligood maqal majeerten. Markey halkaa mareyso ayuu kii majerteen yidhi nin Harti ah ayaan ahay. Markaas ayaa waxa ay gabadhii Gurgure tiri Hartigaab hadaad tahay koob ad biyaha ku cabto ma sidataa. Gabadhii aabeheed baa qayliyay oo yiri AAbo sii biyaha, Illahey baa Harti ka dhigaye isagu iskamuu dhigine . (Harti Gaab waxa la yirah daa reer yar oo Gurguruh magan u ah oo asalkoodu Harti ah)ninkii Majeerteen cagaha ayuu wax ka dayay isagoo gabartii gurgure koobkii biyah ay kala daba cararyeso oo ay ledahay qaado. Walahay cadiim waa sheeko dhaba. Marka Somali isma taqaano
PostPosted: Thu Dec 06, 2007 7:58 am Post subject: Ha Ha Haa Waa run Gurgure waxa ka mid ah Harti Gaab Reply with quote
horta ma xuma sheekadani
Harti gaab waa reer Harti darood ah oo ka mid ah beelah Ali madaxweyn siiba lafta Gurgure ee loo yaqaan Kuundhuuble.
La garanayo meesha ay ka soo raaceen beeshan gurgure iyo goor ay soo dhex dageen, laakin waa run madaama ay beel yar yihiin kuna tiirsan yihiin beeshaan direed dadka qaar baa isku daya in ay yasaan, laakin waa laga guursadaa, waxaayna is dhaldhalaan Ciise iyo Gurgure-- xaabada ayay keenan iyo caano ayaa lagu dacayadeeya.
Qarnigii 1300 boqortoyada Ifat, Moora iyo Aduli MADAXWEYN DIR
Posted by DIRSAME at 1:25 AM No comments:
Posted by DIRSAME at 1:16 AM No comments: